Jardiinooyinka iyo Digada, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
“Laakiin waxaa jirtay beer ku taal meeshii iskutallaabta lagu qodbay iyo goob cusub oo beerta ku jirtay oo aan weligeed ninna la dhigin” Yooxanaa 19:41. Waqtiyo badan oo muhiim ah oo taariikhda Baybalka ah ayaa ka dhacay goobo u muuqda kuwo ka turjumaya nooca dhacdooyinka.
Daqiiqada ugu horeysa ee noocan oo kale ah waxay ka dhacday jardiin qurux badan oo Ilaah Aadan iyo Xaawa ku dejiyey. Dabcan, Beerta Ceeden waxay ahayd mid khaas ah maxaa yeelay waxay ahayd beerta Ilaah; Halkaas waxaad kula kulmi kartaa isaga oo lugeynaya fiidkii qabowga. Dabadeedna masduulaagii wuxuu galay ciyaarta isagoo isku dayaya inuu kala saaro Adam iyo Xaawo iyo kii abuuray. Iyo, sida aan ognahay, waxaa lagu tuuray beerta iyo joogitaanka Ilaah adduun cadow ah oo qodxan iyo yamaarug leh, maxaa yeelay, way dhegeysteen abeesadii, oo waxay ku xadgudbeen amarkii Ilaah.
Dhacdada labaad ee weyn waxay ka dhacday cidla ah meeshii ciise, kii labaad Adam, uu la kulmay tijaabooyinka Shaydaanka. Waxaa la rumeysan yahay in goobta iskahorimaadkaani uu ahaa lamadegaanka Yahuudda duurjoogta ah, oo ah meel khatar ah oo aan la aqbali karin. Faallooyinka Barclay ee Baybalka wuxuu leeyahay: "lamadegaanka wuxuu ku fidsan yahay inta u dhaxaysa Yeruusaalem iyo badweynta dhexe iyo Badda Dhimatay… Waa dhul ciid ah oo huruud ah, dhagxan dumin iyo jaranjarada firidhsan. Waxaad arki kartaa lakabyo dhagxan oo dhagaxyo ah, oo buuro u dhexeysa jiho kasta. Buurahu waa sida ubaxyo ciid ah Dhagax - nuuradda ayaa dillaacday, dhagxantiina way madoobaadeen oo jiireen ... Waxay u dhalaalayaan oo kulayl u kululaan sidii foorno weyn oo kale. Cidlada waxay u sii jeeddaa Badda Dhimatay waxayna ku dhacdaa 360 mitir, jaranjarada dhagxaanta la gooyo, dhagxaan iyo xaar, oo ay ka buuxaan dhagaxyo iyo wejiyadaha wareega oo ugu dambeyntii roobab wata illaa Badweynta Dhimashada ». Waa maxay sawirka ku habboon dunidan dhacday, halkaasoo ah Wiilka Aadanaha keligiis iyo cunnada la'aantiis, ay iska caabisay dhammaan jirrabaaddaha sheydaanka, ee isagu doonayay inuu Ilaah ka cafiyo. Si kastaba ha noqotee, Ciise weli waa aamin.
Iyo dhacdada ugu muhiimsan, goobta waxay isu beddelaysaa xabaal dhagax ka samaysan dhagax adag. Meydka Ciise ayaa la keenay halkan dhimashadiisa ka dib. Isagoo dhimanaya ayuu ka adkaaday dembiga iyo dhimashada, wuxuuna xoojiyay shaydaan. Wuxuu ka soo sara kacay dhimashada - iyo mar kale beer. Maria Magdalena waxay si qalad ah ugu fikirtay inuu ahaa ninkii beerta ka shaqaynayay ilaa uu ugu yeedhay magac. Laakiin hadda isagu wuxuu ahaa Ilaah, oo socda aroorta hore ee qabow, oo diyaar u ah inuu awood u yeesho inuu walaalihiis iyo gabdhaheedii ku soo celiyo geedkii nolosha. Haa, Halleeluuya!
Badbaadiyahow, allabarigii jacaylkaaga ahaa ee aad naga badbaadisay cidlada adduunkan, si aad jidka ugu socotid hadda, maalin kasta iyo weligiisba. Marka waxaan rabnaa inaan uga jawaabno mahadcelin farxad leh. Aamiin
Waxaa qoray Hilary Buck